Fatahaad Hor leh Oo Lagasoo Sheegayo Deegaanno Katirsan Gobolka Sh/dhexe [Wabixin].
Sunday April 29, 2018 - 08:39:16 in Wararka by Super Admin
Fatahaadda uu sameeyay wabiga shabelle ee sanaddan saameyn ba'an ku reebtay magaalooyin iyo deegaanno katirsan gobollada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe.
Xilli Roobabka Guga ay ka curteen gobollada Dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya ayuu wabiga shabelle fatahaad sameeyey, khasaara dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka dhashay fatahaaddan kadib markii biyaha wabiga ay gooyeen boqolaal beero ah oo dalagyo kala duwan ku tacbanaayeen.
Deegaanada uu wabiga Wabiga Shabelle ku fatahay ayaa hoos yimaad degmooyinka Jowhar iyo Mahaday, dadka deegaanka waxay sheegeen in fatahaadda ay cagta marisay beero aad ufarabadan waxaana khasaaraha ka dhashay fatahaaddan lagu qiyaasayaa malaayiin dollar.
Ugu yaraan Saddex Buq ayuu marwalba ka fatahaa wabiga shabelle balse sanadkan waxaa muuqata in fatahaaddu waqtigeedi kasoo hormartay dhibaatada ugu daran waxay ka jirtaa deegaanada hoos yimaad magaalada Mahadaay oo biyuhu maasheeyeen boqolaal Hiktar oo dhul beereed ah, dhanka Buqda Maandheere ee duleedka Jowhar sanadkan dib udhac ayaa ku yimid taas oo beeralayda fursad usiisay in ay ugurtaan dalagyadii ay tacbadeen.
Laba Buq oo kuyaal deegaannada Iji iyo Calaag ayaa iyana Karkaarka Jabsaday waxayna ku fataheen dhul wabiga ka fog ku dhawaad 11 KM sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Biyaha ka baxay buqda Huriwaa ayaa waxay ka gudbeen tuulada Cali Fooldheere waxayna kala jarto wadada isku xirta degmada Mahaday iyo deegaanka Cali Fooldheere illaa iyo deegaannada laysku yiraahdo afarta Tuulo oo ay kamid yihiin Biya Cadde iyo Ceelbaraf.
Wadada xiriirisa degmooyinka Jowhar iyo Balcad ayaa iyana jarantahay kadib markii ay buux dhaafiyeen biyo isbiirsaday oo isugu jira kuwa xareedda Roobka iyo kuwa Fatahaadda Wabiga.
Sidoo kale meel aan ka fogeyn degmada Mahaday ayaa dhinaca Galbeed ee wabiga Shabelle waxaa ka fatahaya biyo kuwaasoo sababay inay kala go’aan isu socodka dadka iyo gaadiidka degmada Mahaday iyo deegaanka Fiidow iyadoo wadada laamiga ah ay biyuhu dul marayaan.
Mid kamida Beeraladeyda gobolka Sh/dhexe ayaa warbaahinta u sheegay in sanadkan ay filayaan fatahaad ka xoog badan kuwii hore sababa la xiriira biyaha wabiga oo saa'id ah iyo roobab Mahiigaan ah oo lafilayo "Sanadkan waxaan aragnaa Fatahaad saa'id ah sababtoo ah Wabiga wuxuu karkaarka jabsaday iyadoo uu bilaaw yahay xilliga Guga " ayuu yiri Xasan oo katirsan beeraleyda Sh/dhexe.